Fa W’adwene Si Asɛm a Ɛho Hia Paa no So—Yehowa Tumidi | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Amis Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
“Na nnipa nhu sɛ wo a wo din de Yehowa no, wo nko ara ne Ɔsorosoroni, asase nyinaa so.”—DW. 83:18.
NNWOM: 46, 136
DƐN NA WOASUA?
Yehowa tumidi a wɔbɛsan ho no, adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɛho hia nnipa nyinaa?
Bere a Hiob hyiaa sɔhwɛ na okuraa ne mũdi mu no, ɔkwan bɛn so na ɛno kyerɛe sɛ ogyina Yehowa tumidi akyi? Mfomso bɛn na Hiob dii?
Nneɛma bɛn na ehia sɛ yɛyɛ de kyerɛ sɛ yegyina Yehowa tumidi akyi?
1, 2. (a) Asɛm bɛn na ɛsɛ sɛ ɛho hia nnipa nyinaa? (b) Sɛ yebu Yehowa tumidi a wɔbɛsan ho no sɛ ɛno na ehia paa a, ɛbɛboa yɛn sɛn?
ƐNNƐ, nnipa pii bu sika sɛ ɛno ne ade a ɛho hia paa. Nea wɔde wɔn adwene si so ne sɛ wobenya wɔn ho anaa wɔbɛbɔ ahonyade a wɔwɔ no ho ban. Ebinom nso, nea ehia wɔn paa ne wɔn abusua, wɔn apɔwmuden, anaa nea wobetumi ayɛ wɔ asetenam.
2 Nanso biribi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ ɛho hia yɛn sen biara. Ɛno ne Yehowa tumidi a wɔbɛsan ho. Saa asɛm no ho hia paa, enti ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye na yɛn werɛ amfi. Dɛn na ebetumi ama aba saa? Nneɛma a yɛyɛ no da biara no betumi agye yɛn adwene paa. Wei betumi ama yɛn werɛ afi sɛ Onyankopɔn tumidi a wɔbɛsan ho no, ɛno na ehia paa. Anaa yebetumi de yɛn adwene asi yɛn haw ahorow so dodo ama yɛn werɛ afi asɛm a ɛho hia no. Nanso, sɛ yebu Yehowa tumidi a wɔbɛsan ho no sɛ ɛno na ehia paa a, ɛbɛboa yɛn ama yɛagyina nsɛnnennen a yehyia wɔ asetenam no ano. Wei bɛma yɛabɛn Yehowa kɛse.
ADƐN NTI NA ƐHO HIA SAA?
3. Sobo bɛn na Satan de abɔ Onyankopɔn wɔ ne tumidi ho?
3 Satan Ɔbonsam kyerɛ sɛ, Yehowa mfata sɛ odi yɛn so. Wei ama Yehowa tumidi ho aba asɛm. Wabɔ Onyankopɔn sobo sɛ ne tumidi nyɛ papa, na ɔde nneɛma pa kame yɛn. Ɔbonsam asɛm ne sɛ, sɛ nnipa ankasa di wɔn ho so a, wɔn ani begye na asi wɔn yiye. (Gen. 3:1-5) Satan san kyerɛ sɛ, onipa biara nni hɔ a obefi ne komam adi Onyankopɔn nokware, na obiara a obehyia sɔhwɛ a emu yɛ den no, ɔbɛpo Yehowa tumidi. (Hiob 2:4, 5) Sobo a Ɔbonsam abɔ no nti, Yehowa ama nnipa kwan sɛ wonni wɔn ho so. Wei bɛma obiara ahu sɛ, sɛ nnipa po Onyankopɔn tumidi a ɛteɛ no a, ɛrensi wɔn yiye.
4. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wosiesie Yehowa tumidi ho asɛm no?
4 Yehowa nim paa sɛ sobo a Ɔbonsam abɔ no nyɛ nokware. Nanso, wama Satan bere sɛ ɔmfa nkyerɛ sɛ nea ɔreka no yɛ nokware anaa. Adɛn ntia? Nea ɛwom ne sɛ, asɛm no fa nnipa ne abɔfo nyinaa ho. (Kenkan Dwom 83:18.) Nea enti a ɛte saa ne sɛ, nnipa mmienu a wodi kan no poo Yehowa tumidi. Efi saa bere no, nnipa pii nso ayɛ saa ara. Wei betumi ama ebinom asusuw sɛ ebia nea Ɔbonsam kae no yɛ nokware. Enkosi sɛ wobesiesie Yehowa tumidi ho asɛm no ama nnipa ne abɔfo adwenem ateɛ wɔn no, aman, mmusuakuw, ne ankorankoro rennya asomdwoe papa biara. Nanso, sɛ wɔsan Yehowa tumidi ho a, obiara bɛbrɛ ne ho ase ahyɛ Yehowa tumidi a ɛteɛ no ase afebɔɔ. Asomdwoe bɛsan aba ɔsoro ne asase so.—Efe. 1:9, 10.
5. Dɛn na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ yegyina Yehowa tumidi akyi?
5 Onyankopɔn bɛsan ne tumidi ho ama obiara ahu sɛ ɛno na ɛfata. Nanso Satan ne nnipa tumidi bedi nkogu pɔtɔɔ, na Yehowa ayi afi hɔ. Onyankopɔn nam Mesia Ahenni no so bedi tumi afebɔɔ. Wɔn a wobekura wɔn mũdi mu nso bɛma ada adi sɛ, nnipa betumi agyina Onyankopɔn tumidi akyi. (Yes. 45:23, 24) Nnipa a wokura wɔn mũdi mu na wogyina Yehowa tumidi akyi no, wopɛ sɛ woka wɔn ho anaa? Yegye di sɛ wopɛ. Sɛ yebetumi akura yɛn mũdi mu a, ɛsɛ sɛ yɛde yɛn adwene si asɛm a ɛho hia paa no so, na yehu nea enti a ehia saa.
YEHOWA TUMIDI A WƆBƐSAN HO—ƐHO HIA SEN YƐN NKWAGYE
6. Yehowa tumidi a wɔbɛsan ho no, ɛho hia sɛn?
6 Sɛnea yɛadi kan aka no, Yehowa tumidi a wɔbɛsan ho no, ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ ɛho hia nnipa paa. Ɛho hia mpo sen anigye a onipa biara benya. Wei kyerɛ sɛ Yehowa nnwen yɛn ho na yɛn nkwagye ho nhia anaa? Ɛnte saa koraa. Adɛn ntia?
7, 8. Sɛ wɔresan Onyankopɔn tumidi ho a, adɛn nti na ɔbɛhwɛ ama ne bɔhyɛ ahorow nso abam?
7 Yehowa dɔ adesamma paa na wɔda ne koma so. Ofii ne pɛ mu maa ne Ba no bewui, na ɔnam ne Ba no mogya so ama yɛanya daa nkwa ho anidaso. (Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:9) Sɛ Yehowa anni ne bɔhyɛ ahorow so a, Ɔbonsam benya biribi agyina so aka sɛ Onyankopɔn yɛ ɔtorofo a ɔde nneɛma pa kame yɛn. Anka ɔbɛka sɛ Onyankopɔn tumidi nyɛ papa. Ɛbɛma asɔretiafo a wodi Yehowa ho fɛw no nso adi bem. Nea wɔka ne sɛ: “Ne mmae a wɔahyɛ ho bɔ no wɔ he? Hwɛ, efi da a yɛn agyanom dedae no, biribiara te sɛ nea ɛte fi abɔde mfiase.” (2 Pet. 3:3, 4) Enti sɛ wɔresan Yehowa tumidi ho a, nnipa a wotie no no nso, ɔbɛhwɛ ama wɔagye wɔn nkwa! (Kenkan Yesaia 55:10, 11.) Afei nso, Yehowa tumidi gyina ɔdɔ so. Enti yebetumi anya awerɛhyem sɛ, Yehowa asomfo a wodi no nokware no, wɔbɛda ne koma so daa. Ɔbɛkɔ so adɔ wɔn, na wakyerɛ sɛ n’ani sɔ wɔn.—Ex. 34:6.
8 Sɛ yegye tom sɛ Yehowa tumidi ho hia a, ɛno nkyerɛ sɛ yɛn nkwagye ho nhia anaa yɛnsom bo wɔ n’ani so. Mmom no, baabi a asɛm no da ara na yɛde ato no; tumidi ho asɛm no ho hia sen yɛn nkwagye. Sɛ yehu sɛ tumidi ho asɛm no hia paa a, ɛbɛma yɛatumi de yɛn adwene asi ɛno so, na yɛagyina Yehowa tumidi a ɛteɛ no akyi.
SƐNEA YEBENYA ADWENE A ƐFATA
9. Sobo bɛn na Satan bɔɔ Hiob? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
9 Bible mu nhoma a akyɛ paa no, Hiob nhoma no ka ho. Yɛkan a, yebehu sɛ ɛsɛ sɛ yenya Yehowa tumidi ho adwene a ɛfata. Hiob nhoma no ma yehu sɛ, Satan bɔɔ Hiob sobo. Ɔkae sɛ, sɛ Hiob hyia sɔhwɛ a emu yɛ den paa a, ɔbɛpo Onyankopɔn. Satan kae sɛ Onyankopɔn ankasa nsɔ Hiob nhwɛ. Nanso Yehowa anyɛ. Mmom, ɔmaa Satan kwan sɛ ɔnsɔ Hiob nhwɛ. Yehowa kae sɛ: “Biribiara a ɔwɔ hyɛ wo nsa.” (Kenkan Hiob 1:7-12.) Ankyɛ koraa na Hiob hweree n’asomfo, n’agyapade, ne ne mma du a ɔdɔ wɔn no. Satan ma ɛyɛɛ sɛ gyama Onyankopɔn ankasa na ɔde ɔhaw no baa Hiob so. (Hiob 1:13-19) Ɛno akyi, Satan de yare yayaayaw bi a ɛyɛ hu bɔɔ Hiob. (Hiob 2:7) Ne yere ne nnamfo mmiɛnsa a ayɛ sɛ wɔdɔ no no kaa nsɛm a ɛyɛ yaw de buu n’abam. Wei maa n’awerɛhow no yɛɛ kɛse.—Hiob 2:9; 3:11; 16:2.
10. (a) Dɛn na Hiob yɛe a ɛkyerɛ sɛ okuraa ne mũdi mu maa Onyankopɔn? (b) Mfomso bɛn na odii?
10 Ekowiee sɛn? Ɛbɛdaa adi sɛ Satan sobo no, nokware baako koraa nni mu! Hiob annan n’akyi ankyerɛ Onyankopɔn. (Hiob 27:5) Nanso eduu baabi no, Hiob werɛ fii sɛ Onyankopɔn tumidi ne ade a ɛho hia paa. Ɔkekaa nsɛm pii de buu ne ho bem, na mpo obisaa Onyankopɔn nea enti a ɔrehu amane. (Hiob 7:20; 13:24) Sɛ yɛhwɛ amanehunu a Hiob faa mu nyinaa no a, anhwɛ a yɛbɛka sɛ, ɔyɛɛ saa mpo a, ntease wom. Nanso, Onyankopɔn hui sɛ ehia sɛ ɔteɛ Hiob adwene. Dɛn na Yehowa ka kyerɛɛ Hiob?
11, 12. Dɛn na Yehowa boaa Hiob ma ohui? Hiob yɛɛ n’ade sɛn wɔ nteɛso no ho?
11 Wohwɛ Hiob ti 38 kosi 41 no a, wubehu nsɛm a Onyankopɔn ka kyerɛɛ Hiob no. Baabiara nni hɔ a ɛka sɛ Onyankopɔn hyɛɛ da kyerɛɛ Hiob nea enti a ɔrehu amane. Nea Yehowa kae no, na ɛnyɛ n’adwene ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ Hiob nea enti a ɔrehu amane, efisɛ na Onyankopɔn ne Hiob nni nkyerɛmu biara. Mmom, na Yehowa pɛ sɛ ɔboa Hiob ma ohu sɛ, sɛnea ɔno Onyankopɔn yɛ kɛse no, Hiob yɛ nkyene a na wayera mu. Afei, ɔboaa Hiob ma ohui sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ehia paa sɛ ɔde n’adwene si so. (Kenkan Hiob 38:18-21.) Wei maa Hiob hui sɛ Onyankopɔn tumidi no ne ade a ɛho hia paa.
12 Ná Hiob agyina sɔhwɛ a emu yɛ den ano, nanso Yehowa teɛɛ ne so. Wei kyerɛ sɛ Yehowa ne Hiob anni no yiye anaa? Dabi. Hiob nso annya saa adwene no. Nea Hiob faa mu nyinaa akyi no, akyiri yi ɔkaa nsɛm bi de kyerɛe sɛ n’ani asɔ nteɛso no. Ɔkae mpo sɛ: ‘Matwe asan na manu me ho dɔte ne nsõ mu.’ Wei ma yehu sɛ, ɛmfa ho sɛ na Yehowa nteɛso no yɛ tẽẽ no, ɛkanyan Hiob ma otumi yɛɛ nsakrae. (Hiob 42:1-6) Afei nso, na aberante Elihu adi kan ateɛ Hiob adwene. (Hiob 32:5-10) Bere a Hiob gyee Onyankopɔn nteɛso toom na ɔsesaa n’adwene no, Yehowa maa afoforo hui sɛ n’ani asɔ sɛnea Hiob dii nokware wɔ sɔhwɛ mu no.—Hiob 42:7, 8.
13. Bere a Hiob sɔhwɛ no baa awiei mpo no, onyaa Yehowa nteɛso no so mfaso. Ɔkwan bɛn so?
13 Bere a Hiob sɔhwɛ no baa awiei mpo no, ɔkɔɔ so nyaa Yehowa nteɛso no so mfaso. Ɔkwan bɛn so? Ɛwom, “Yehowa hyiraa Hiob awiei sen ne mfiase.” Nanso ɛbɛyɛ sɛ Hiob ansan ansi ne dedaw mu prɛko pɛ; egyee bere. Akyiri yi, “onyaa mmabarima baason ne mmabea baasa.” (Hiob 42:12-14) Ɛnyɛ dɛn ara a Hiob ani gyinaa ne mma du a na Satan adi kan akunkum wɔn no. Amanehunu a ɔfaa mu no, ebetumi aba sɛ ne werɛ amfi prɛko pɛ. Ebia akyiri yi Hiob huu nea enti a ohyiaa sɔhwɛ no. Sɛ saa mpo a, ebetumi aba sɛ na ɛtɔ da a odwinnwen ho sɛ adɛn nti na na ɛsɛ sɛ ohu amane pii saa. Biribi saa kɔɔ so wɔ Hiob adwenem mpo a, na obetumi akae Onyankopɔn nteɛso no. Ná ɛno bɛboa no ma ɔde n’adwene asi Onyankopɔn tumidi no so, na wahu sɛ ɛno na ehia paa. Ɔyɛ saa a, na ɛbɛkyekye ne werɛ.—Dw. 94:19.
Yebetumi ayi yɛn adwene afi yɛn haw so na yɛde asi nea ehia paa no so? (Hwɛ nkyekyɛm 14)
14. Dɛn na yesua fi nea ɛtoo Hiob no mu?
14 Yɛn nso, Hiob asɛm no betumi aboa yɛn ama yɛahu sɛ Onyankopɔn tumidi no ho hia. Ebetumi nso akyekye yɛn werɛ. Adeɛ yi, Yehowa ama wɔakyerɛw “ama yɛn nkyerɛkyerɛ, na yɛnam yɛn boasetɔ ne Kyerɛwnsɛm no mu awerɛkyekye so anya anidaso.” (Rom. 15:4) Dɛn na yesua fi mu? Nea yesua fi mu paa ni: Ɛnsɛ sɛ yɛde yɛn adwene si yɛn haw so araa ma yɛn werɛ fi ade a ehia paa no. Ɛno ne Yehowa tumidi a wɔbɛsan ho. Momma yɛnkae sɛ, nea yebetumi ayɛ de agyina Onyankopɔn tumidi akyi ne sɛ yebedi nokware wɔ sɔhwɛ a emu yɛ den mu te sɛ Hiob.
15. Sɛ yehyia sɔhwɛ na yedi nokware a, dɛn na efi mu ba?
15 Mfaso a ɛwɔ yɛn nokwaredi so no, sɛ yedwinnwen ho a, ebetumi akyekye yɛn werɛ. Adɛn ntia? Efisɛ sɛ yehyia sɔhwɛ a, ɛboa yɛn ma yetumi yɛ biribi. Ɛma yenya hokwan de kyerɛ sɛ yegyina Onyankopɔn tumidi akyi, na ɛnyɛ sɛ Yehowa bo afuw yɛn. (Mmeb. 27:11) Sɛ yehyia sɔhwɛ na yenya boasetɔ a, ‘ɛde anisɔ ba,’ na ɛhyɛ yɛn anidaso mu den. (Kenkan Romafo 5:3-5.) Hiob asɛm no ma yehu sɛ “Yehowa wɔ ayamhyehye ne mmɔborɔhunu.” (Yak. 5:11) Enti yebetumi anya awerɛhyem sɛ, sɛ yegyina Yehowa tumidi akyi a, obetua yɛn ka. Sɛ wei wɔ yɛn adwenem a, ɛbɛma ‘yɛanya boasetɔ akosi ase na yɛde anigye anya abodwokyɛre.’—Kol. 1:11.
FA W’ADWENE SI NEA EHIA PAA NO SO
16. Ɛnsɛ sɛ yɛn werɛ fi da sɛ Yehowa tumidi a wɔbɛsan ho no, ɛno na ehia paa. Adɛn ntia?
16 Ɛyɛ nokware, ɛnna fam sɛ yɛbɛkɔ so de yɛn adwene asi Yehowa tumidi a wɔbɛsan ho no so. Ɛtɔ mmere bi a, ebetumi ayɛ yɛn sɛ ɔhaw a yɛrehyia no abunkam yɛn so. Ɔhaw nketenkete mpo, sɛ yɛde yɛn adwene si so a, ebetumi ayɛ kɛse paa wɔ yɛn ani so. Enti, ɛnsɛ sɛ yɛn werɛ fi da sɛ, sɛ yehyia sɔhwɛ a emu yɛ den a, nea ehia paa ne sɛ yebegyina Onyankopɔn tumidi akyi.
17. Sɛ yɛkɔ so yɛ Yehowa adwuma a, ebetumi ama yɛde yɛn adwene asi Onyankopɔn tumidi a wɔbɛsan ho no so. Ɔkwan bɛn so?
17 Sɛ yɛkɔ so yɛ Yehowa adwuma bere nyinaa a, ebetumi aboa yɛn. Ɛbɛma yɛde yɛn adwene asi Onyankopɔn tumidi a wɔbɛsan ho no so. Nhwɛso bi ni. Ɔdansefo bi a yɛfrɛ no Renee fã dwudwoe, daa na ɔfa yaw mu, na onyaa kokoram. Bere a ɔda ayaresabea no, odii ayarefo, wɔn a wɔbɛsra ayarefo, ne wɔn a wɔyɛ adwuma wɔ hɔ no adanse. Ayaresabea baako bi deɛ, ɔdaa hɔ nnawɔtwe mmienu ne fã, na ɔde nnɔnhwerew 80 dii nkurɔfo adanse. Bere a Renee gyina owu ne nkwa nkwanta mpo no, ne werɛ amfi Yehowa tumidi ho asɛm no da. Ɛno maa ne ho dwoo no kakra.
18. Ɔkwan bɛn so na onuawa bi suahu ma yehu sɛ, sɛ yegyina Yehowa tumidi akyi a, mfaso wɔ so?
18 Yɛfa ɔhaw ne ahokyere nketenkete mu da biara da. Ɛno mu nso, ɛsɛ sɛ yɛde yɛn adwene si Yehowa tumidi ho asɛm no so. Jennifer kɔkaa wimhyɛn gyinabea bi nnansa. Ná ɔretwɛn wimhyɛn a ɔde bɛkɔ fie, nanso wimhyɛn a wɔbɛyɛ ho nhyehyɛe biara na nhyehyɛe no agye agu. Jennifer tee nka sɛ n’ani so atan no, na wabrɛ. Enti anka obetumi asu ne ho mmɔbɔ. Nanso, ɔbɔɔ mpae sɛ Yehowa mmoa no ma ontumi nka asɛmpa no nkyerɛ afoforo a na wɔn nso ani so atan wɔn no. Dɛn na efii mu bae? Odii nnipa bebree adanse, na ɔmaa nhoma pii. Ɔkae sɛ, “Ɛwom sɛ na makɔ ahokyere mu de, nanso mihui sɛ Yehowa aboa me. Ɔma minyaa ahoɔden de yii ne din ayɛ.” Nokwasɛm ne sɛ, Jennifer de n’adwene sii Yehowa atirimpɔw so.
19. Dɛn na Yehowa nkurɔfo yɛ wɔ ne tumidi ho?
19 Nokware som mufo nko ara na wogyina Yehowa tumidi akyi; atoro som mufo nyɛ saa. Efi teteete na Onyankopɔn nkurɔfo agyina ne tumidi akyi. Kyerɛwnsɛm no ma yehu sɛ Onyankopɔn tumidi ho asɛm na ehia paa. Enti yɛn a yɛwɔ nokware som mu no, ɛsɛ sɛ yɛn mu biara gyina Onyankopɔn tumidi akyi bere nyinaa.
20. Mmɔden a worebɔ sɛ wubegyina Yehowa tumidi akyi no, ɔte nka sɛn wɔ ho?
20 Mmɔden a worebɔ sɛ wobɛsom Yehowa nokwarem na wode boasetɔ agyina sɔhwɛ mu no kyerɛ sɛ wugyina ne tumidi akyi. Nya awerɛhyem sɛ Yehowa ani sɔ paa. (Dw. 18:25) Nea enti a ɛsɛ sɛ wufi wo koma nyinaa mu gyina Yehowa tumidi akyi ne sɛnea wubetumi ayɛ saa no, adesua a edi hɔ no bɛma woahu pii aka ho.